Satire Essay Examples 2021 A Guide to A Perfect Satire Essay: Akwụkwọ Akụkọ Ugbu a
Satire edemede Ihe Nlereanya 2021 S Guide to A Perfect Satire Essay
gbara akwụkwọ Education by Nhazi ederede TMLT na June 18, 2021
Ọ bụghị edemede niile pụtara ka ọ dị oke njọ ma gbochie ya. N’oge ụfọdụ, edemede ga-atọ gị ụtọ ịgụ. A satire edemede bụ otu ihe atụ kachasị mma nke edemede edemede na-atọ ụtọ. N’isiokwu a, anyị ga - eduzi gị site n’ide ederede ịkpa ọchị zuru oke; nakwa inye gị ụfọdụ n'ime satire edemede kachasị mma.
Kedu ihe bụ Satire Essay?
Merriam-Webster na-akọwa ịkwa emo dị ka akwụkwọ edemede ji okwu nzuzu, njakịrị, ma ọ bụ ịkwa emo iji kpughee na ịkwa emo omume ọjọọ mmadụ ma ọ bụ nzuzu.
Satire juru ebe niile na ọrụ edemede dịka akwụkwọ, poems, edemede, abụ na ọbụna na fim. Iji satire bu ihe edemede bu uzo ozo n’egosi iru mmadu n’eme ihe okike.
Ọ bụkwa otu ụzọ esi etinye nkatọ aghụghọ na-arụ ọrụ na adịghị ike nke otu isiokwu nke onye edemede na-atụle (ọ nwere ike ịbụ metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbanwe mmekọrịta ọha na eze, ndị ama ama, wdg).
Edere Satirical iji dee eziokwu banyere otu isiokwu ma gbanwee ya iji mee ka ọ dị ka ihe ọchị. Ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - emikpu onwe ha n'ịgụ akụkọ edemede ebe ọ bụghị naanị na ha ga - anabata ha, ha ga - enwetakwu ihe ọmụma banyere otu isiokwu.
Ihe omuma atu nke satire di na akwukwo ndia gunyere:
Jonathan SwiftEdemede a kpọrọ “A Modest Proposal” na-ekwu maka okwu gbasara mmekọrịta obodo na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Ireland. Ndị Irish na-arịa ụnwụ nri na gọọmentị enweghị ike idozi nsogbu a. Swift ji nwayọ na-atụ aro na iji dozie ụnwụ nri, ụdị ọhụrụ nke ụmụ mmadụ bụ ihe ngwọta maka mgbake akụ na ụba na Ireland. Mgbe ọ na-atụle edemede ya, aro Swift nwere ike iyi ihe jọgburu onwe ya mana isi okwu ya bụ iji akaja na-atụ aro na-agaghị ekwe omume ịkwa emo adịghị ike nke gọọmentị Ireland.
Mgbapu nke mkpọchi nke Alexander Pope weghaara klas nke elu nke narị afọ nke 18 England. Otutu ndi mmadu no na klas a bu ndi nzuzu na ndi mmadu. Ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ na-eji ejiji, na-achọ naanị ọdịmma onwe ha.
"Ma ọ bụ onye nymph ahụ ga-emebi iwu Diana, ma ọ bụ ụfọdụ ite china na-esighi ike na-enweta ntụpọ ma ọ bụ na-asọpụrụ nsọpụrụ ya, ma ọ bụ ihe ọhụụ ọhụrụ ya". Otu ihe si n’otu uri Popu na-akọwa otu nwa agbọghọ a kpọrọ Belinda nke ntutu isi ya gbachiri yie ka ọ na-efunahụ omume ọma nke klaasị ha n’oge a. Igodo nke ntutu furu efu dị ka ite china na-esighi ike nke gbawara.
Fordị ndị ọzọ nke Satire
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị a ma ama, ma ọ bụ ndị ọzọ a ma ama na-ekwukarị okwu na mgbasa ozi. A na-eji ihe eji eme ihe ọchị iji mee ihe ọchị ndị a site n'ịkwubiga okwu ókè banyere omume ma ọ bụ njirimara ha họọrọ.
Ọbụna ụfọdụ na-eme ka mmadụ ndị a ma na-ekwubiga okwu ókè banyere ọdịdị ha. Parodi juru na fim, tiivi na n’egwú.
Otu ihe atụ bụ egwu egwu a kpọrọ Rutles. N'ịbụ onye guzosiri ike na njedebe 70s, ìgwè a na-akpọ Beatles na ndị na-akwado ha. Ha na-eji ejiji ka Beatles ma na-atọ ọchị nke abụ ha site na ịme egwu yiri nke Beatles.
Otu ihe atụ bụ abụ "Bilie ma Gaa" nke Rutles nke bụ parody site na egwu "Bilie" site na Beatles. Nke a bụ otu okwu nke "Bilie Gaa":
Gbagharị n'okporo ụzọ awara awara na-eme iri isii na ise
n’etiti eriri ọcha abụọ
Kwụ ya ala na gas na isi ya na ígwé ojii
Ọ hụghị akara otu ụzọ
Bilie laghachi n'ụlọ gị
Sarcasm bụ ihe juru ebe niile na satire. Ọ bụ ihe na-eme ka satire na-atọ ọchị ma na-atọ ọchị. Sarcasm dị ka akọwapụtara na Akwụkwọ ọkọwa okwu Cambridge na-ekwu okwu nke putara na ihe di iche n’ihe mmadu kwesiri ikwu iji katoo ihe ma obu mmadu n’uzo ochi. Ihe atụ ụfọdụ nke njakịrị njakịrị bụ:
"Anyị niile bụcha ndị na-amaghị ihe, mana mmadụ ga-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ onye nzuzu." Benjamin Franklin
“Gị na ndị nzuzu na-ese okwu Ha ga-adọkpụrụ gị baa n'ọkwa ha ma jiri ahụmịhe mara gị ihe. ” Mark Twain
“Mmadụ niile bụ otu. Ha nwere ihu dị iche iche ka ụmụ nwanyị jiri dị iche na ha. ” Marilyn Monroe
Etu esi ede edemede edemede?
1. Familiarize First Olee otú dee a Satire edemede
Mgbe ị na-ede edemede edemede, ọ dị mkpa ka ị mara na ị nwere ebumnobi siri ike iji lebara echiche na echiche gị anya n'otu okwu ị masịrị gị.
Ọbụna ma ọ bụrụ na echere ya n'ụdị ya, ịnwere ike itinye echiche nke gị maka okwu a ma gbanye ya ka ọ bụrụ ihe ọchị, echefula ị na-enye ozi dị mkpa nke isiokwu ị na-ede.
2. Họrọ Isiokwu Kwesịrị Ekwesị Ide
N’ịhọrọ isiokwu ị ga - ede banyere ya, ọ kacha mma ịmara isiokwu ị chọrọ ide banyere ya. Ọ ga-abụrịrị ihe masịrị gị nke ukwuu.
Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ịhọrọ isiokwu ị na-amaghị n'ezie n'ime ya ma ọ bụ na ị maghị nke ọma, ọ ga-agwụ gị ike ịde ya ọkara. Isi ihe ọzọ dị mkpa ị ga-atụle bụ ịhọrọ isiokwu ma ọ bụ okwu metụtara ọha mmadụ ma nwee ike ịkọ onye ọ bụla.
Ihe atụ kachasị mma nke isiokwu ịhọrọ site na:
ihe ndị dị ugbu a
nsogbu ahụike ma ọ bụ gburugburu ebe obibi
omume ụmụ mmadụ
Ọ ga-enyekwa aka ịmata isiokwu ndị a nke ọma site n'ikiri ma ọ bụ ịgụ akụkọ. Kindsdị isiokwu ndị a bụ ihe ndị mmadụ kacha nwee nguzo nke ha, yabụ ọ kachasị mma ịhọrọ ya ka ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - enweta mmeghachi omume.
Echefula ihe edere n’ederede edere ka ndi gua ya. Inweta mmeghachi omume, ma ọ dị mma ma ọ bụ na ọ dịghị, pụtara na ị rụzuola ọrụ gị.
3. Gaa na Isi
N'ikpeazụ, mgbe ị nyochachara ma chee isi okwu ịchọrọ ịtụle, oge eruola ka ị chọpụta, gịnị bụ isi edemede a m na-ede maka ya?
Ihe ndị ịchọrọ ịtụle bụ: Gịnị bụ nguzo gị n’okwu a ụfọdụ? You na-achị ihu ọma ma ọ bụ na ọ bụghị ?, Kedu ka ị ga - esi mee ka isiokwu a bụrụ ihe ọchị? Ozugbo ị chọpụtachara ihe ị na-ekwu, ị ga-ama ihe doro anya ma sie ike banyere ihe ị ga-ede banyere ya.
4. Mara Ndị Na-ege Gị Ntị
Ọ dị gị mkpa dịka onye edemede ịmara onye bụ ndị na-ege ntị ị na-edegara ya. Na-ede maka ndị na-agụ akwụkwọ ọkachamara? Ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ?
Ndị otu a dị iche iche nwere mmasị nke ha ma ọ bụ ụdị edemede ha.
Ndị ọkachamara nwere ike chọọ ụdị ederede ederede ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ nwere ike chọọ ụdị ejiji.
Isi okwu bụ, site n’ịchọpụta ndị na - agụ akwụkwọ gị, ọ ka mma ịdị na-adịkwu mfe nghọta n’ebe ha nọ. Iji nyere gị aka ịhazigharị usoro edemede gị na ndị na - ege gị ntị, lee ajụjụ ndị ịchọrọ ịza:
Kedu ka esi ede na ederede ederede ma ọ bụ nke ederede? Kedu ka esi ede edemede a ma ọ bụrụ na ị na-ede maka ndị na-eto eto?
5. Ugbu a Oge eruola ide
Ugbua i nweworị nkwado site na ide edemede edemede. Maraworị isiokwu ị ga-atụle na ihe ga-abụ isi okwu gị, na ị matala ndị ga-abụ ndị na-ege gị ntị.
Ugbu a ọ bụ oge dee edemede gị pụtara ìhè. N’ezie, iji mee ka ọ pụta ìhè, ị ga-achọ ndụmọdụ ole iji mee ka edemede gị bụrụ nke agụ mma.
Mara onwe gị nke ọma iji kwuo okwu mgbe ị na-ede edetu iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ gị nwee mmasị. Ihe atụ nke atụmatụ okwu ị pụrụ iji bụ:
Hyperbole: Iji okwu ikwubiga okwu ókè mee ka onye na-agụ ya nwee mmetụta ka ukwuu.
Akpụkpọ ụkwụ m dị n'ikiri ụkwụ na-egbu m!
Asusu: O bu iji okwu n’eji gosiputa ihe ozo putara na ihe o putara.
Onye lepụrụ anya na windo ya mgbe mmiri na-ezo nke ukwuu. O tiri mkpu, sị,Lee ihu igwe mara mma anyị na-enwe taa. ”
Metaphor: Udinam ikọ emi owụtde ndimen n̄kpọ kiet ndomo ye kiet eken.
I nwere obi okwute.
Iti: A kọwara nke a dị ka egwuregwu na okwu. Ọdịdị ya nwere ike ịbụ n'echiche dị iche iche nke otu okwu ahụ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ n'otu echiche ma ọ bụ ụda nke okwu dị iche iche.
"Ugbu a bụ oge oyi nke afọ ojuju anyị nke mere n'oge okpomọkụ site na anyanwụ nke York…”Ihe si na William Shakespeare Richard III (Act 1 scene 1). Ihe gbara ọkpụrụkpụ nkwupụta a site na agwa Richard III bụ na ọ bụ nwa nke Duke nke York.
Nghọta: typedị ụdị okwu a bụ mgbe onye na-ekwu okwu n’amaghị ama mee ka ọnọdụ ma ọ bụ mmadụ dị ala karịa ya.
You mara. ”Ọ bụ ụbọchị mgbede dị njọ. Onye lanarịrị n'ụgbọ mmiri Sir Cosmo Duff Gordon, dịka ọ kọwara mbibi nke Titanic.
Satire edemede Ihe Nlereanya
Di iche iche nke ụdị ọ bụla bụ ihe ekwesịrị ime ememme ma ọ bụ gbasara agbụrụ, okike, okpukperechi ma ọ bụ inwe mmekọahụ. Agbanyeghị, ọbụlagodi narị afọ nke iri abụọ na otu, a na-elegharakarị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Asia anya karịa Hollywood na ọkachasị na sitcoms ndị America.
Ọrụ ndị a na-eme n'Eshia, na-egosipụta njirimara oge. Ọrụ ndị a na-ahụkarị na Eshia na-agha ụgha na njedebe nke ụdịdị dị iche iche site na ịbụ ndị nerds ruo ndị akwụna.
Echiche nke ndị Eshia inarticulate na Bekee ma ọ bụ ghara ịghọta nuances nke ọdịbendị ọdịda anyanwụ bụ nke a na-ejikarị eme ihe maka ebumnuche egwuregwu.
N'azụ ọchị a na-eweta nghọta na ndị Eshia anaghị eji ya akpọrọ ihe kama na ọ bụ maka ntụrụndụ ndị ọzọ n'ihi na ịnwụnyere ụkwụ ebe etiti ịkpa ọchị na-eme ka anyị ghara ịtụ ụjọ n'ụzọ a na-agwa anyị.
Ndị Asia bụ akụkụ buru ibu nke America ọhụrụ dị iche iche na ọdịbendị ya mana ọ gosipụtaghị dịka ihe akaebe nke enweghị nnọchite.
Site na imebi otu esi egosi ndi Asia na sitcoms abuo abuo nke abuo 2000 Broke Girls na Gilmore Girls, edemede a bu iji nyochaa uzo ndi Asia, ma gosiputara mgbe nile, nke Hollywood gosiputara na asusu.
Edemede a na-achota ihu ka America siri nabata ma nabata njirimara Asia na mba ndi ozo di iche-iche kwuru. Ihe nlere nke telivishọn bụ ngwa ọrụ dị ike n'ụzọ ọ na-esi egosi otu anyị si aghọta ụwa ma na-akpụzi ihe ọmụma anyị na ụfọdụ ndị mmadụ
Gaa n'ihu Readinggụ…
Mgbe enweghi ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ ghara igosi ndị Asia na TV na naanị ihe ngosi bụ echiche a na-eme ugboro ugboro, Asia na-egbochi ole na ole atụmanya nke mgbasa ozi gosipụtara na-anọchiteghị anya agbụrụ ha ma ọ bụ ọdịbendị ha.
American sitcoms bụ ihe atụ nke otu Hollywood si eji ndị Asia dị ka steepụ iji mepụta akara ngosi kama inye ha ikpo okwu iji kpughee ọdịbendị ha iji kụziere ndị Western na-amaghị ihe ọ bụla. A hụrụ dị ka usoro ihe ịga nke ọma maka ndị na-eduzi ụmụ nwanyị, Gilmore Girls nwere ọganihu maka nnọchite nwanyị mana ihe ha na-eche na ndị Asia natara mmeghachi omume dịgasị iche.
Otu n'ime ndị isi, Oriakụ Kim, nwere àgwà ndị na-enwu gbaa banyere ụzọ ndị nne na nna Asia si azụ ụmụ ha site n'igosi nnukwu ọdịiche dị na ndị isi ezinụlọ Western mgbe a bịara n'ihe banyere njikwa ndị nne na nna.
N'oge na-adịbeghị anya, sitcom 2010 Broke Girls nke izizi 2 hụrụ agwa Han Lee, onye nwe ụlọ oriri na ọ dinụ Koreanụ ndị Korea-America, na-akọwapụta ụkpụrụ nkwalite ọdịmma nke Western Western nwere mmasị imegharị; site na Bekee nke ndị mba ọzọ kwabatara na echiche nke ụmụ nwoke Asia nwere obere agụụ mmekọahụ.
Hollywood nwere ogologo akụkọ ihe mere eme mgbe ọ na-ezighi ezi iji gosipụta ndị Eshia na ihuenyo na stereotypes abụghị naanị ụzọ ha si eme ya.
Na-ele anya Satire si edemede edemede N'elu, amaara m na ị dịla njikere ide edemede gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla jiri obiọma kwuo igbe dị n'okpuru.
Ọzọkwa, mee nke ọma ịkekọrịta njikọ a na ndị enyi gị niile na ndị ị hụrụ n'anya. Nke ahụ dị na ntanetị mgbasa ozi gị niile.
Nleba Anya Anya na Ule Maka Childrenmụaka Dị Nso M
CRUTECH Kalịnda agụmakwụkwọ maka 1st Semester 2020/2021 Oge Lelee Oge Mmelite
Ajụjụ ọnụ okwu dị ike iji mee ka nrọ gị rute na 2021
Lọ ahịa Gucci na Nigeria Lelee Ọnọdụ na Nkọwa kọntaktị nkọwa
Umu akwukwo umu akwukwo ohuru nke Sophia maka 2019 Freshers na otu esi etinye
LASU amalitela ntọala [JUPEB] Ndebanye aha mmemme - 2016/17
Nnyocha Ule 50 kacha mma chọrọ ezigbo enyi na ndị hụrụ n'anya
Tags: free satire edemede, edemede edemede edemede, satire edemede edemede na ihunanya, satire edemede edemede na ulo akwukwo, satire edemede edemede na social media, satire edemede na ego, satire edemede gosiputa ihe omuma, satire atụ, Satire si edemede edemede
« A Ndepụta nke Bestlọ Ọrụ Nchekwa Nchekwa Kacha Mma kachasị mma
Why Starting a Home-based Business Pụrụ ịbụ a Great Echiche »
Nnukwu Nwanna Naija 2021- Ozi zuru ezu gbasara ya
Portal Jobs Portal Naịjirịa 2021 www.crossover.com
Ọrụ Crossover na Nigeria 2021 Ntuziaka na ntozu ntozu
Ekpere ekeresimesi kacha mma ịgwa ndị ezinụlọ na ndị enyi maka mmemme enyemaka
Companieslọ ọrụ kacha akwụ ụgwọ 25 kacha elu 2021 - Ndepụta kacha mma & Ndepụta aha
Achingkụzi Ọrụ Dị Nso Me 2021 Hụ Ihe Nlereanya kachasị ọhụrụ
Ntinye ntinye ego FRSC 2021/2022 Portal
Ofdị Companlọ ọrụ You Kwesịrị Workrụ Ọrụ na 2021
FRSC Mbanye n'ọrụ.frsc.gov.ng 2021/2022 Portal Ngwa
Ọrụ PhD na Nigeria 2021 Lelee Ọnọdụ Job 10 kacha elu maka ndị na-ejide PhD
Ọrụ na Lagos 2021/2022 Ntuziaka Ngwa na Eligibility chọrọ
Ọrụ Nkụzi Na Nigeria 2021/2022 Trending Job Vacancies Online
Oghere Mbanye na FRSC na Portal Application Portal
Ọrụ kacha ọhụrụ na Naịjirịa 2021 maka ndị gụsịrị akwụkwọ na Fresh School with Good Grades
Ọrụ dị na Port Harcourt 2021/2022 Ntuziaka Ngwa yana Eligibility chọrọ
NYSC Banye Dashboard 2021 My NYSC Dashboard portal.nysc.org.ng
PTI Portal www.portal.pti.edu.ng Lelee Mmelite Ngwa Ọhụrụ
Otu esi eme ntuli aka na BBNaija 2021 - Usoro ịtụ vootu dum
UEI Portal Mmụta 2021/2022 Mmelite | Deba aha Akaụntụ ọhụrụ Ebe a
Portal Ngwa NDA www.nda.edu.ng/#home/index Lelee Mmelite kachasị ọhụrụ